Al-shabaab oo sheegtay Mas’uuliyada qaraxyadii xalay ee Muqdisho Mar kalana ku celiyay in shacabku ay ka fogaadaan goobaha Ciidamada DF iyo Dhinacyada caawiya | Sagal Radio Services
“ Haa arintaan waan sameynay,wuxuuna ahaa weerar Bartilmeed ama u jeedo lahaa,mana ahan weerarkii ugu horeeyay mana noqon doono,ayuu yiri Sheekh Abuu Jabal,”wuxuuna hadalkiisa intaasi raaciyay in Shacabka Muqdisho ay kaga digayaan inay ka fogaadaan agaagarka wuxuu ugu yeeray Cadowga iyo waliba xarumaha Dowlada Soomaaliya.
Sidoo kale.Al-shabaab ayaa shacabka ka dalbaday inay ka digtoonaadaan Hotelada inta badan ay ka dhacdo Xafladaha iyo damaashaadka soo dhaweynta sanadka cusub.
Saraakiil ka tirsan Dowlada Soomaaliya oo ka hadlay Qaraxa dhankooda waxay sheegeen inay kaga dhinteen Saraakiil Ciidan,iyagoona qasaaro ku tilmaamay Qaraxii u danbeeyay ee Hotelka afaafkiisa hore ka dhacay.
Waxayna wacad ku mareen inay sii wadi doonaan dagaalada ay kala horjeedaan waxay ku tilmaameen Kooxaha qaswadayaasha,iyagoona howlahadooda u hakan doonaan sida ay tilmaameen howsha qaran ay shacabka u hayaan.
Hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho ayaa ku yaalo meel sidaasi aan kaga fogeyn Garoonka Diyaaradaha ee magaalada Muqdisho,waxaana Bishii September ee sanadkii 2012-kii lagu weeraray ismiidaamin lala damacsanaa madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi doorasho ka dhacday Muqdisho ku soo baxay.
Madax Dowlada Soomaaliya ayaa ku celi celiya inay Muhiimadooda Koowaad ay tahay sugida amaanka hadana Muqdisho iyo meelo ka mid ah Gobolada dalka ay ka socdaan Qaraxyada.